Ogaden News Agency (ONA) – Ergay Cusub oo loo Magacaabay Soomaaliya.
Ergay Cusub oo loo Magacaabay Soomaaliya.
Posted by Daljir	/ November 25, 2015
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa ergay cusub u soo magacaabay xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM, kaasoo bedelaya ergaygii hore Nicholas Kay.
Ergayga cusub oo lagu magacaabo Michael Keating ayaa u dhashay dalka Ingiriiska wuxuuna qabanayaa xilka wakiilka gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo madaxa xafiiska UNSOM. Wakiilkii hore Nicholas Kay ayaa dhamaadka sanadka ay ugu egtahay xilka uu hayay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa uga mahadceliyay Nicholas Kay dadaalkii uu sameeyay ee ku saleysnaa geesinimada iyo hogaanka fiican, ee labadii sano ee uu xilka hayay oo ahayd waqti adag oo isbadal siyaasadeed uu ka socday Soomaaliya.
Ergay cusub ee loosoo magacaabay Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay inuu waayo araganimo u leeyahay nabadaynta iyo arrimaha siyaasada, wuxuuna ka soo shaqeeyay dalalka Bariga dhexe, Afrika iyo dalka Afghanistaan.